सुचीमा हेर्नुस्: चार वर्षमा चार सरकार, एक सय ७८ मन्त्री ! | Emedia Hub UK
Home News सुचीमा हेर्नुस्: चार वर्षमा चार सरकार, एक सय ७८ मन्त्री !
संविधानसभा र रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को चारवर्षे कार्यकालमा चार सरकार गठन हुँदा मुलुकले १७८ मन्त्री पायो ।
ती सरकारमध्ये कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सबैभन्दा सानो २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् इतिहासकै जम्बो ६४ सदस्यीय छ ।
अन्तरिम संविधानअनुसार गठन भएको ५९९ सदस्यीय संविधानसभासहितको संसद्बाट चार वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ९९ सांसद मन्त्री भएका छन् । समानुपातिकतर्फका ७१ जना सांसद मन्त्री भएका छन् ।
संविधान जारी हुनुअघिको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आठजना गैरसांसद मन्त्री भए । तर, नयाँ संविधानमा मन्त्री बन्न सांसद हुनैपर्ने प्रावधान राखिएकाले त्यसपछिका सरकारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आएका सांसद मन्त्री भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २४ सांसदमध्ये एमालेका अग्नि खरेल एकपटक मन्त्री भएका छन् । चार सरकारमध्ये सोमबार मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरेका तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि निरन्तर तीनपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
त्यस्तै, राप्रपा नेपाल हुँदै राप्रपा भएका कमल थापा पछिल्ला तीन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी भएका छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
गिरिबहादुर केसी (गैरसांसद राज्यमन्त्री)यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।